သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ပုံလေးတွေရလို. မျှဝေခံစားကြည်.တာ။ ဒီပုံလေးတွေကြည်.ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဘယ်မှာလဲ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှု?? ဘယ်မှာလဲ အခွင်.အရေး?? ဘယ်မှာလဲ လုံခြုံရေးခါးပတ်??? ပြုတ်ကျလိုက်လို.ကတော့..... ဟူး.....မလွယ်တဲ.ဘဝ အထွေထွေ......။ သင်ကောဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ???
ကျွန်မတို.ကသာပူနေတာ သူတို.မှာတော.ပျော်လို. ရွှင်လို.။
Posted by မိုးယံ at 12:44 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ရင်တွေ တလှပ်လှပ်နဲ့ ..ကြည့်ရတာ..စိတ်ထဲမှာလည်း
မကောင်းဘူးးး။ သူတို့ တွေအစားရင်မောရင်းး
S,pore မှာတော့...Safety Techniques တွေ
သုံးနေပြီလို့ ကြားတယ်။ တချို့ နေရာတွေတော့
ဒီလိုမျိုး ရှိနေအုန်းမယ်တူတယ်။ ..
အမောင်...မိုးယံ...ပထမ Comment က အစ်မအိချို..ကိုလှမ်းပြောတာပါ။ Sharing လုပ်ပေးတဲ့
မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် တတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ အသက်စွန့်ပြီးလုပ်နေရတဲ့သူတို့ကို ကြည့်ပြီး သနားတယ်။
(သိရဲ့သားနဲ့ အဲဒီစာကြောင်းကို ရေးမိပါတယ်)
ဒါတွေ အားလုံးက အင်ဒိုတွေပဲ များပါတယ်။
လူသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဘဝ လုံခြုံမှု အသက်အန္တရာယ် စိတ်ချမှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။